Toeram-pandrefesana karbenina karpony China Manufacturer
Description:Electrical Heating Mat,Toeram-pandehan'ny fitaovana fanafody ho an'ny Japoney,Manasa an'i Mat sy Amazon
Home > Products > Reptile Heat Pad > Under Tank Pad > Toeram-pandrefesana karbenina karpony
Safe Waterproof Heating Pad ho an'ny Reptiles Amazon Hot Sales Matematika Mat
Ao ambanin'ny fantson-drano na fantson-drano dia fomba lehibe hanomezana "hafanana kibo" ho an'ireo karazam-borona tropikaly na tany efitra. Kitapo marevaka sy mihodinkodina amin'ny fametrahana eny amin'ny faritry ny varavarankely. Tsy ho tafahoatra loatra ireo fitaovana fanamainana ireo, fa hanampy amin'ny fampitomboana ny mari-pana ao amin'ny fonon'ny terrarium anao. Izy ireo koa dia fomba hentitra mba hanomezana hafanana fanampiny fanampiny ao anaty trano na faritra hafa ao amin'ny tanko izay tsy tratran'ny hazavana. Ny hafanana dia mamporisika ny rafi-pandaminana ny biby fiompy biby ary manome ny fampiononana avy amin'ny hafanana azony amin'ny tontolo voajanahary. Ny fampiasana fasika na fitaovana miteraka hafanana toy izany dia hamela ny fifindrana hafanana tsara kokoa mba hampitombo ny fahombiazany. Ny ankamaroan'ny dragona be volombava, uromastyx, sokatra, ary ireo biby mandady be fitiavana be indrindra! UL nankasitraka ny fanamainana! Raha ampiasaina eo ambanin'ny tank dia ahazoana antoka fa hanome rivotra. Apetraho eo amin'ny zoro efatra ao amin'ilay fefy ireo kodiarana ao anatin'io onja io mba hanomezana toerana ambony amin'ny tank mba tsy hikoriana amin'ny tany. Raha ampiasaina amin'ny sisin'ny kofehy dia ahazoana antoka fa mamela efitrano eo amin'ny rindrina sy ny fefy ho an'ny rivotra. Tendrombohitra sy habe: Mini: 4x7 ", 4 watts Small: 6x8", 8 watts Medium: 8x12 ", 16 watts Large: 8x18", 24 watts
Reptile Heating Pad 8W eo ambanin'ny fitaovana fanafody ho an'ny Reptilia tropikaly sy mafana
Hevitrana Rainfallest Terrarium Substra amin'ny infrared-6 * 8 inch Contact Now
Toeram-pandehan'ny hafanana hafahafa Contact Now
Electrical Heating Mat Toeram-pandehan'ny fitaovana fanafody ho an'ny Japoney Manasa an'i Mat sy Amazon Electric Heating Mat Electric Heat Mats Eelectric Heating Pad Electric Indoor Heating Mat Electric Heating Film